Sirta ku saabsan suuqgeynta iimaylka jawaabta leh iyo qaabeynta bogga soo degida | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka, dhowr
El Naqshadaynta jawaabta ayaa muhiim u ah maanta qaababka kala duwan awgood taas oo isticmaaleha uu ka wajahayo kiniinkiisa, moobilka iyo xitaa kombuyuutarka. Naqshaddan waxqabadka leh ee ku saabsan suuqgeynta iimaylka iyo degitaannada bogagga ayaa muhiimad weyn u leh xiriirka omnichannel ee macaamiisheenna.
Marka waa inaad si dhab ah u qaadatid si aad u qaadatid arrimo kala duwan ballacyo kala duwan si ay ula yimaadaan qaabka ugu fiican suurtagal wargeysyadaas ama bogga soo degitaanka ee macaamiisha mustaqbalka ee aan dooneyno inay ka beddelaan xayeysiisyadayada Google ama Facebook.
1 Naqshadeynta jawaabta ee suuqgeynta emaylka
2 Naqshadeynta jawaabta ee bogga degista
Naqshadeynta jawaabta ee suuqgeynta emaylka
Suuqgeynta iimaylku waa mid ka mid ah siyaabaha loogu dhawaaqo dalabyada wax soo saarka ama kuwa loogu talagalay qoraallada cusub ee lagu abuuray boggeena sidaas cidhiidhi hab qoto dheer dhammaan kuwa raacsan.
In wargeysyadan ay jawaabaan waxay ka dhigan tahay taas si buuxda ayaa looga arki karaa moobaylka, kiniin ama kumbuyuutar. Marka waa inaan isku daynaa inaan haysano aaladaha lagama maarmaanka ah si dhammaan walxaha muuqaalka ay isula jaan qaadaan ku filan akhriska fudud ee warsidaha.
Jawaab macnaheedu waa taas bandhiga bogga aaladaha kaladuwan had iyo jeer waa sax. Tan waxaan u leenahay qalab email marketing taasi waxay naga caawineysaa inaan tijaabino warsidaha loo sameeyay qaabab kala duwan sidaasna aan wax uga badalno qiyamka sida suufka ama margin si ay si fiican dib ugu noqdaan madaama aan yareyneyno balaadhinta biraawsarkayaga.
en el naqshadeynta websaydhka leh CSS "Su'aalaha Warbaahinta" ayaa la adeegsadaa in loo qaabeeyo degel iyadoo loo eegayo qaabka. Ilaa 360px waxay noqon laheyd mobilo, iyo laga bilaabo 360px ilaa 650px waxaan dib u habeyn ku sameyn karnaa dhamaan isticmaaleyaasha ka arka websaydhkeena kiniin.
Qaar ka mid ah mabaadi'da wargeysyada suuqgeynta e-maylkeennu waa:
Kala sarayn muuqaal oo nadiif ah: cinwaanka H2 si looga tago qoraalka qaab cutub ah.
Laba ilo oo kala duwan: mid cinwaanka iyo mid qoraalka wuxuu ka dhigayaa joornaalkeenna si wanaagsan loo akhrin karo.
El adeegsiga midabka si loo kala saaro cinwaanka, qoraalka iyo waxyaabo kale: waxaan si tartiib tartiib ah uga gudbi karnaa cawl mugdi ah oo kan fudud.
Un CTA (Wicitaan ficil) oo cad oo lagu kala sooci karo: haddii astaanta shirkadeena ay ku qoran tahay guduud, CTA waxay ku yeelan kartaa midabkan halka inta soo hartay midab dhammaystiran leh.
Waxaan ku siineynaa tusaale cad oo weyn naqshadeynta jawaabta ee warsidaha ay fuliso Filmin iyo inaad ku arki karto sawirka la bixiyay. Muuqaaleedka qoraalka oo cad, iyo qoraalka oo ah mid aad u khafiif ah laakiin taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah u aragno meelaha kala duwan ee nalagu casuumay si aan u aqrino haddii aan rabno. CTA-da maaha inay ka timid adduun kale, laakiin waxay ka caawineysaa astaanta ciyaarta taasna waxay naga dhigeysaa inaan aragno waxa na sugaya.
Meelo ku filan oo ku yaal xadadka, caddaan ahaan midabka ugu weyn ee qoraalka iyo taasi waxay ku habboon tahay astaanta Ee sumadda; ku hareereysan cirro kaas oo ka dhigaya mid muuqda. Sawir indho qabad leh oo dejinaya barta wargeys ee qabta daqiiqadda ugu horreysa. Meelaha ayaa sidoo kale looga tagayaa dhinacyada si aan ballaca shaashadda oo dhan loo "cunin".
In nooca desktop ayaa haysa mabaadi'daas, xitaa ka tagista meelo badan oo qoraalka ah isla markaana dhinac kasta uga tagaya dhinac aad u weyn:
Naqshadeynta jawaabta ee bogga degista
ka isla mabaadi'da ayaa loo isticmaali karaa naqshadeynta jawaabta ee bogga soo degitaanka. Aad ayey muhiim u tahay in la qaato waqtiga oo dhan adduunka si sax ah loo doorto tusaalaha loona raaco qawaaniinta qaarkood qaabeynta:
Fududeynta muuqaalka: Waxaan ka hadleynaa sidii loo ilaalin lahaa meelaha banaan si diirada loo saaro CTAs.
Sawirro qurux badan oo soo jiidasho leh akhristaha, adigoon ilaawin xalka iyo inay u muuqdaan kuwo qumman.
Ahmiyada midabka iyo inaan mar labaad xoojino.
Waa inaan ka shaqeynaa qaabeynta jawaabta ee bogga soo degitaanka ee mobilka, kaniiniga iyo desktop-ka. Qaado waqti loo baahan yahay in la isku dayo mar kale iyo mar labaadba sidii isbeddel kasta waxaa lagu arkaa saddexdaas qaab, maaddaama aan isku kalsoonaan karno oo aan iloobi karno in isbeddeladaas lagu sameeyay CSS ay u muuqan doonaan kuwo laga argagaxo moobiilka.
Hotjar Degitaanka Hotjar
Waa shaqo caajis noqon karta, laakiin waa muhiim inaan waqti u qaadno inaan tijaabino isbeddel kasta. The isticmaalka gees-ka-gees iskuna day, sida ugu macquulsan, inaadan u seegin xeerarka ku jira CTA-yada ama badhanka waxqabadka:
que masaafada la xiriirta qoraalka iyo badhanka badhanka waa horumar dhammaan saddexda qaab. Mid yar iyo mid weyn toona midna maaha iyo inuu isku joog yahay.
La saamiga cabirka badhanka CTA inta kale ee cunsuriga ah halka ay ku taal waa in la siiyaa.
Tusaale cad oo tan ah ayaa ah shaqada ay ku samaysay Shopify boggaaga degitaanka on desktop iyo kaas oo aad ka arki karto nooca mobilada. Feejignaanta isticmaalka midabada, meelaha cadcad iyo qoraaladaas oo leh cabirradooda habboon iyo qaab qoriddooda:
Talooyin taxane ah oo aad leedahay bog ka deg deg wanaagsan oo loogu talagalay ganacsigaaga ama dukaan-ka internetka iyo joornaaladaas oo aad muhiim u ah in la helo wararka cusboonaysiinta iyo kuwa ku dhiirrigeliya isticmaaleyaashaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Barashada masters-ka naqshadeynta jawaabta ee suuqgeynta emaylka iyo bogagga degitaanka